यस्तो छ सांसद यादव 'अपहरण' को भित्री कथा
जनकपुरधाम- उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टी विभाजनको संघारबाट जोगिँदै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालसँग एकीकृत भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक्कासि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु र लामो समयदेखि समाजवादी पार्टी विभाजन हुने चर्चाका बीचमा पार्टी एकीकरण भएको हो।
६ पार्टी मिलेर बनेको राजपा र समाजवादीबीचको एकता कति टिक्ला त्यो त समयले बताउला। तर, दुई पार्टीबीच एकतापूर्व भएको 'सांसद अपहरण'को घटनाले नेपाली राजनीतिको फोहोरी खेलको एउटा पक्षलाई उदांगो बनाइदिएको छ।
अझ सांसद अपहरण भनिएको घटनामा नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपीसम्म मुछिनुले राजनीति गर्नेहरुकाे निकृष्टता पर्दाफास भएकाे छ। साथै उच्च ओहोदामा पुगिसकेर अवकाश पाइसकेका व्यक्ति सम्भवत: सरकारबाट पाइने कुनै नियुक्तिका लागि अर्कै धन्दामा संलग्न हुँदा पदीय मर्यादामा पनि कालाे दाग लागेकाे छ।
तत्कालीन समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गर्न पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालसहित नेकपा सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठले मुख्य भूमिका खेलेको आरोप जनता समाजवादीका नेताहरुले लगाएका छन्।
पार्टीले यी तीनजनामाथि कारबाहीको माग गरेको छ। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापित शेरबहादुर देउवाले सांसद अपहरण गर्नेमाथि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
के भन्छन् पूर्वआईजीपी खनाल?
खनालले आफूमाथि लगाएको आरोप सत्य नरहेको दाबी गरे। उनले सांसद यादव स्वेच्छाले आफूहरुसँग महोत्तरीबाट काठमाडौं गएको बताए।
‘म कामविशेषले सांसद महेश बस्नेतको भक्तपुरस्थित घर पुगेको थिएँ। फोनमा उहाँहरुको केही कुरा भएको थियो। थप कुरा गर्न त्यहाँबाट जनकपुर जाने योजना बन्यो,’ नेपाल समयसँग खनालले भने, ‘हामी जनकपुर गयौं। राति बर्दिबासस्थित गौतम होटलमै बस्यौं।’
सांसद यादवले फोन गरेर आफूहरुलाई बोलाएको खनालले बताए। उनले भने, ‘उहाँले महोत्तरीस्थित घरमै आउन भन्नुभयो। खाजा र खाना त्यहीं खायौं।’
त्यसपछि पार्टीका सांसद उमाशंकर अरगरियासँगै बर्दिवास होटलमा आएर केहीबेर कुरा गरेर फेरि जनकपुर पुगेको खनाल बताउँछन्। तर त्यहाँ के कुरा भयो भन्ने रहस्य उनले केही खुलाएनन्। आफू दोस्रोपटक जनकपुर पुग्दा सांसद बस्नेत र श्रेष्ठ काठमाडौंमा रहेको खनालले बताए।
‘अपहरण गर्नैपरे बिहान ९ बजे उहाँको घरमा किन जानुपर्थ्याे? राति नै ल्याउँदा भइहाल्थ्यो नि,’ खनालले भने, ‘जनकपुर आइसकेपछि उहाँले पार्टीकै अर्का सांसद डा. सूर्यनारायण यादवलाई भेट्ने कुरा गर्नुभयो। उहाँ र प्रदेशसभा सदस्य कौशल यादव डा. सूर्यनारायणलाई भेट्न जानुभयो, म बाहिर गाडीमै बसें।’
एक घण्टासम्म दुवै जना नआएपछि आफूले फोन गरेको जानकारी खनालले दिए। उनले भने, ‘सूर्यनारायण यादवजीसँग उहाँहरुको के कुरा भयो मलाई थाहा भएन, पछि मलाई पनि भेट्न भन्नुभयो। उहाँलाई भेटेर हामी त्यहाँबाट निस्कियौं।’
जनकपुरबाट बर्दिवास आइसकेपछि होटलमा सबैजनाले खाजा खाएर काठमाडौंका लागि हिँडेको खनालले बताए। ‘महेशजी, किसानजीसहित हामी सबैजना काठमाडौं हिँड्यौं। सिन्धुलीमा खाना खाइयो,’ खनाल भन्छन्, ‘डा. यादवले आफ्नो मोबाइल पनि अर्को गाडीमा जानीजानी छोड्नुभएको थियो, कारण मलाई थाहा भएन।’
आफूहरुसँगै सांसद उमाशंकर अरगरिया, प्रदेशसभा सदस्य कौशल यादव, पार्टीका प्रदेश सदस्य राजीव यादवलगायत काठमाडौं गएको खनालले बताए। सांसद यादवलाई राति काठमाडौंको मेरियट होटलमा राखेर आफू घरतर्फ लागेको खनालको भनाइ छ।
‘होटलमा पार्टीका सांसदहरुसँग छलफल गरेर उहाँहरुको बिहानै बालुवाटार जाने कार्यक्रम थियो,’ उनी भन्छन्, ‘साढे ११ बजेतर्फ पार्टी एकीकरणको कुरा आएपछि उहाँको मन बदलिएको हुनुपर्छ।’
‘बिहान मलाई फोन आयो- डा. यादव पार्टी अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई नजिक पुगे भनेर, मैले के गर्ने हो मैले जबाफ दिएँ,’ खनालले भने। आफ्नै खुसीले आएको मानिस अन्यत्र गएको उनको भनाइ छ।
दुई पार्टीबीच एकता हुन लागेको थाहा पाएपछि डराएर आफू जोगिन अपहरण भएको प्रचारबाजीमात्र गरिएको खनालको दाबी छ।
सांसद डा.यादवसहित उनका पार्टीका शीर्ष नेताहरुले पार्टी फुटाउन अपहरण गरिएको दाबी गरिरहे पनि तत्कालीन समाजवादी पार्टीका नेताहरुले यसलाई झूटो भनिसकेका छन्।
पार्टीका नेता प्रदीप यादवले अपहरणको कुरा नाटकमात्र रहेको दाबी गरेका छन्। मन्त्री नपाउने भएपछि पार्टीको कारबाहीबाट जोगिन डा. यादवले अपहरणको नाटक गरेको उनको भनाइ छ।
'उपेन्द्रको हैकमका कारण विद्रोह गरेका हौं'
सांसद यादवले पार्टी नेतृत्वको हैकमवादी प्रवृत्तिविरुद्ध आवाज उठाए पनि आफूहरुको पार्टी फुटाउने कुनै योजना नरहेको बताएका छन्। पार्टी एकीकरण हुँदा आफूहरुलाई खुसी लागेको उनको भनाइ छ ।
पार्टीका अर्का एकजना सांसद पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हैकमवादी प्रवृत्तिविरुद्ध १०/११ जना सांसद असन्तुष्ट रहेको बताउँछन्। ‘पार्टी फुटाउने नै योजना त थिएन। तर नेतृत्वको तानाशाहीविरुद्ध विद्रोह गर्ने योजना पक्कै थियो,’ ती सांसदले भने, ‘आज वा भोलि विद्रोह हुनु निश्चित थियो। हाम्रो विद्रोहको परिणामस्वरुप पार्टी एकता भएको छ।’
‘आखिर पटकपटक सबै सांसदहरु किन असन्तुष्ट भइरहेका छन्, यसको कारण के हो,’ उनी भन्छन्, ‘अध्यक्ष जिल्ला आउँदासमेत सांसदहरुलाई जानकारी हुँदैन। एकल हिसाबले पार्टी चलाउने काम भइरहेको थियो।’
शीर्ष नेतृत्वले सांसदहरुको विश्वास जित्न नसकेकाले पार्टीभित्र यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ। पार्टीभित्र पटकपटक कुरा उठाउँदासमेत आफूहरुको गुनासो कहिल्यै सुनवाइ नभएको ती सांसदले बताए।
नेतृत्वलाई पाठ सिकाउन विद्रोह गर्नुपरेको उनले बताए। ‘तानाशाहीविरुद्ध लडेर हामीले संघीयता ल्याएको हौं, पार्टीभित्र संघीयता र प्रजातन्त्र हुनुपर्दैन?’ उनको प्रश्न छ।